Shiinaha DP-22 Soosaarka Kaamirada Kuleylka ee Kuleylka ah iyo Warshad | Dianyang
Mabda'a shaqada ee sawir-qaadaha kuleylka ah ee infrared:
Sawir qaadaha kuleylka ee infrared wuxuu u beddelaa shucaaca infrared-ka aan la arki karin oo ka soo baxa dusha sare ee derbiga dib-u-dhigista sawirro kuleyl ah oo muuqda iyadoo loo marayo isbeddelka heerkulka dibadda Adoo qabanaya xoojinta shucaaca infrared ee ay shey shucaacayaan, heerkulka qeybinta dhismayaasha waa la xukumi karaa, si loo xukumo meesha godku kujiro iyo wax daadanaya.
Hawlgalka sawir qaadaha kulaylka ee infrared:
Xakamee masaafada toogashada:
In aan ka badnayn 30 mitir (haddii lagu qalabeeyo lens-ka telephoto, masaafada toogashadu waxay noqon kartaa 100 mitir)
Xakamee xagalka toogashada:
Xagalka toogashada waa inuusan ka badnaan 45 darajo.
Haddii aysan jirin feejignaan sax ah, qiimaha tamarta dareeraha waa la dhimayaa, saxsanaanta heer kulka ayaa liidata. Shayga ogaanshaha ee leh kala duwanaanta qiimaha heerkulka, qaybta leh qiimaha cad ayaa dib loo eegi karaa, ka dibna sawirku wuu caddaan karaa.
Ka shaqeynta sawirka sawir qaade kuleyliyaha infrared:
Qalabka kamaradda sawir qaadaha iyo barnaamijka falanqaynta dhammaantood waxay leeyihiin shaqooyin kala duwan oo guddi midab leh. Marka loo eego walxaha ogaanshaha kala duwan, sawirro kaamero midab badan oo dareen leh ayaa la dooran karaa.
Way adag tahay in la ogaado meesha wax daadanayaan iyo daloolka muuqaalka dhismaha, derbiga bannaanka ee dhismaha ayaa la soo gudboonaaday dhibaatada ogaanshaha darbiga. Soo bandhigida qalabka baaritaanka caqliga, shaki la'aan waa duco weyn oo baaritaanka goobta ah, iyada oo loo marayo infrared, sida ku cad isbeddelka heerkulka, sawirka. Si kooxda farsamada ay u cadeyso sababaha baxsiga, barnaamijyo dayactir buuxa oo buuxa, oo kafiican xalinta dhibaatada, si loo daboolo baahiyaha macaamiisha.
Codsiyada ku jira boosteejooyinka moobiilka
Qeexitaanka kamaradda DP-22 ee kuleylka kuleylka ah ayaa ka hooseeya,
Aragtida aragtida Jaangooyo 56 °, toosan 42 °
Muujin Xallinta muuqaalka 320x240
Xiga: Kaamirada Sawirka DP-12 ee infrared Thermal